XOG: Kooxda SS Lazio oo ka baaraan degeysa inay iskaga baxdo horyaalka Talyaaniga! (Sabab?) – Gool FM
XOG: Kooxda SS Lazio oo ka baaraan degeysa inay iskaga baxdo horyaalka Talyaaniga! (Sabab?)
Raage December 12, 2017
(Roma) 12 Dis 2017 – Warar soo baxaya ayaa sheegaya in SS Lazio ay ka baaraan degeyso inay gebi ahaanba iskaga baxdo tartanka horyaalka Serie A-da Talyaaniga kaddib guuldarradii kulankii Torino.
Sida uu faafinayo Premium Sport, madaxwaynaha Lazio ee Claudio Lotito ayaa dareensan in ‘lagu dhibaateeyay’ go’aan ‘qarsoodi ah’ oo sida uu qabo ah in Lazio laga hor istaago inay ka mid noqoto afarta kooxood ee Serie A ugu sarreeysa, ee ka qayb qaadan doonta CL.
Kooxda Gogorrrada ama Aquile hayaa kulamadii dambe si joogto ah uga cabanayay khaladaad dhanka garsoorka ah, iyadoo xalay ay 3-1 uga badisay kooxda Torino kaddib markii kaadhka cas loo taagey Ciro Immobile , tiiyoo ay jirto inay Lazio qabto in Iago Falque aan laga dhigin kubad uu gacmeeyay oo rigoore ahayd, halka roosada la dhiibey markii herti lgu eedeeyay Ciro waloow uu Nicolas Burdisso sheegay inaysan jirin taabasho jireed.Macallinka Lazio ee Simone Inzaghi ayaa isna ku doodaya in “kooxdiisa khalad laga galay todobaadkii 4-aad oo xiriir ah”, halka laacibka Luis Alberto uu ku dooday “inaysan dadku jeclayn inay arkaan” iyagoo galay boosaska Champions.
Mohamed Salah oo 4-bil gudahood markii 3-aad ku guulaystay laacibka bisha ee Liverpool
Paul Pogba oo xaqiijiyay inuu ku dhawaaday ku biirida Real Madrid